Onollo: fitantanana haino aman-jery sosialy ho an'ny ecommerce | Martech Zone
Ny orinasako dia nanampy mpanjifa vitsivitsy tamin'ny fampiharana sy fanitarana ny azy ireo Shopify ezaka amin'ny varotra tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Satria i Shopify dia manana fizarana lehibe eo amin'ny sehatry ny e-varotra, ho hitanao fa misy taonina fampifangaroana novokarina izay manamora ny fiainana ny mpivarotra.
Ny varotra varotra sosialy amerikana dia hitombo mihoatra ny 35% mihoatra ny $ 36 miliara amin'ny 2021.
Ny fitomboan'ny varotra ara-tsosialy dia fitambaran'ny rafitra fitaterana harona miompana izay ampidirina eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery sosialy ary koa fiovan'ny toetran'ny mpividy nandritra ny taona lasa. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia mety maniry ny hizara sy hampiroborobo ny vokatra sy ny fampielezan-kevitr'izy ireo ny orinasa e-commerce. Ny rafi-pitantanana haino aman-jery sosialy dia matetika tsy mitambatra hisamborana sy hanarahana ny lisitrao sy ny varotrao amin'ny media sosialy… mandraka ankehitriny.
Onollo: Fandaharam-potoana sy fanamafisana ny paositra varotra sosialy
Ity misy horonantsary topy maso tsara:
Onollo dia manolotra sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy manan-tsaina sy mifamatotra mafy ho an'ny filanao e-varotra, ao anatin'izany:
Fampidirana ecommerce - fampifangaroana novokarina miaraka Shopify, Magento, WooCommerce, ary bigcommerce.
Fametahana vokatra - Midira, manova, ary mamoaka ny angona katalaogin'ny vokatrao amin'ny tsindry vitsivitsy. Onollo dia mamoaka ny angon-drakitra vokatra avy amin'ny fivarotanao amin'ny tsindry iray monja. Azonao atao ny mamorona fametahana vokatra media sosialy tsy misy fisintomana mankaleo ireo sary, anaran-tsokosoko, famaritana, vidiny, URL, sns. Mandehana mivezivezy ara-organika maimaimpoana. Lazao amin'izao tontolo izao ny zavatra amidinao.
Kalandrie sosialy - Mamorona fandefasana haino aman-jery sosialy na inona na inona karazana amin'ny alàlan'ny fampiasana angona vokatra avy amin'ny fivarotanao. Alaharo ary araho amin'ny alimanaka Onollo ny famoahana media sosialy rehetra.
Fandaharam-potoana Smart - Ny algorithm AI an'ny Onollo dia manolotra ny fotoana mety indrindra amin'ny lahatsoratra manaraka. Tsy maminavina intsony. Tokony ho mora ny media sosialy.
Autopilot (Endri-javatra mahagaga) - Tohizo ny famoahana raha miala sasatra. Autopilot dia haka sy hamoaka atiny misy ifandraisany amin'ny fotoana mety amin'ny tambajotran-tseraseranao rehetra.
Misorata anarana amin'ny kaonty Onollo maimaim-poana
Tags: AmazonBigCommerceEbayFacebookGoogleLinkedInmagentoonolloPinterestshopifyhaino aman-jery sosialyhaino aman-jery sosialy autopostkalandrie media sosialyfitantanana media sosialyfandaharam-potoana amin'ny media sosialyTikTokTwittermaniryWixwoocommerce